Ingobo yomlando yesigaba: Rheumatism
Amathiphu amahle futhi asheshayo: Qala ngokuhamba okude Ezansi kwesihloko, ungabuka ividiyo ngokuzivocavoca umzimba ngobuhlungu emilenzeni. Siphinde futhi sinikeze amathiphu ezilinganisweni zokuzithiba (njenge amasokisi wokucindezela ithole og amasokisi wokucindezela we-plantar fasciitis). Izixhumanisi zivuleka efasiteleni elisha.
11 / 01 / 2021 /i fibromyalgia, rheumatism/av olimalayo
- Eminyangweni yethu ehlukahlukene eVondtklinikkene e-Oslo (Lambertseter) kanye noViken (Eidsvoll Sound og I-Råholt), odokotela bethu banekhono elikhethekile elikhethekile ekuhloleni, ekwelapheni nasekuqeqesheni ukuhlunyeleliswa kwezinyawo, umlenze kanye neqakala. Chofoza izixhumanisi noma wakhe ukufunda okwengeziwe ngeminyango yethu.
Ikhasi 1 kwezingu-11123>»